Ọzụzụ zụlitere ihe banyere okike na ọdịbendị ya na atụmatụ ọrụ Crazy Ọhụrụ - RayHaber
HomeTurkeyMediterranean Region07 AntalyaIngbọ okporo ígwè ga-eji Project Crazy Ọhụrụ gafere
Ingbọ okporo ígwè ga-eji Project Crazy Ọhụrụ gafere
12 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 07 Antalya, 38 Kayseri, 42 Konya, 50 Nevsehir, 68 Aksaray, Central Anatolia Region, Mediterranean Region, ụgbọ okporo ígwè, General, Oru ngwa ngwa, Isi akụkọ, Turkey 0
ihe omumu ohuu ga-akuzi uwa na omenaala
Nkwupụta Mmetụta Mmetụta Akparị Ikpeazụ (EIA) nke Kayseri-Nevsehir-Aksaray-Konya-Antalya High Speed ​​Train (YHT), emere 10 na July mkpebi siri ike nke EIA. Usoro ahịrị kilomita nke 4 + 607, nke mejupụtara akụkụ 566, ga-eripịa akụ ọdịnala anyị yana okike, ndụ, akụrụngwa mmiri na ubi ọmụmụ. N'ime ọrụ ahụ, enwere ọwara 66, 24 viaduct, 102 elu, 391 n'okpuru, ọdụ 5. A ga-emecha 9.7 ruo ijeri TL.
otu ụbọchị Dabere na akwụkwọ akụkọ Erk Acarer'in Antalya, Seydisehir, Konya, Aksaray na Avanos 5, gụnyere ebe a ga-ewu ụlọ ahụ. A ga-eme ndeputa n’elu ụlọ. 7 ga-enwe ohere nchekwa buru ibu ebe a na-egwu olulu. 4 na-ewu ụlọ ga-adịgide ruo ọtụtụ afọ. Ebumnuche ya bụ iji dọta uche nke ndị njem nleta na Antalya n'obodo ndị ọzọ: ọzọ ga-enye ndị ọzọ njem nleta ọzọ, mgbanwe ndị mba ọzọ ga-abawanye na Central Anatolia ga-adịghachi! "
A kọghị mpaghara ndị a!
Ihe mgbochi mbụ maka ọrụ a sitere na Munalun Antalya İbradı, ebe onye isi oche nke ndị ọka iwu Contemporary Association (ÇHD) na ọka iwu Antalya Bar Association Münip Ermiş kwuru de ọdachi ọhụrụ gburugburu ebe obibi ”. Nkwupụta ahụ gụnyere ọdọ Köprülü Canyon, Ọdọ Mmiri Beyşehir na Mmiri Kurşunlu na eriri Antalya. Ermiş kwuru na akụkụ dị mkpa nke ahịrị ahụ gafere İbradı, Ormana eke, Altınbeşik National Park na Üzümdere dịka mpaghara echedoro.
Site na Antalya Expo Center, akara ahụ abụghị naanị imerụ mpaghara ndị a. Perge, Aspendos, Erimna obodo mgbe ochie na mpaghara nchekwa Üzümdere na-elekọta ọhịa dị n'okporo ụzọ ọdịda ọdịda anyanwụ nke Osimiri Manavgat. Bido n’ọdụ ụgbọ mmiri Antalya, na-eso ụzọ mgbanaka Western, na-agafe n’ime ọhịa Düzlerçamı wee jikọta na Bucak-Burdur; Termossos obodo ochie na oke ọhịa Düzlerçamı, nke bụ ala nna nke fallow bụ Mpaghara Nchedo Anụ ọhịa. Akụkọ ahụ gụnyere nkwupụta na-asọ oyi banyere mbibi anụ ọhịa. "Ha ga-ezere ịbịa ebe a." Onye ọka iwu Ermiş, "Biri, mgbada, ewu ọhịa, nkịta ọhịa, anụ ọhịa wolf ma ọ bụrụ na i nwere uche zere ịsị." Agbanyeghị, na okwute okwute na osisi ike mmiri (HEPP), ihe ndị dị ndụ na mpaghara enweghị ebe ọ bụla ha ga-aga!
Ndidi gafere na ndagwurugwu. Ugwu nke Taurus, umu ihe ndi ozo di na obodo Europe, a ga-amapu ya ogha ma gha agbaghari. N’aka ozo, oru ngo a aghaghi imebi obodo oge ochie, mpaghara ahihia, ihe mmiri na anumanu, kamakwa umu anumanu.
Ọ bụghị naanị Antalya
Usoro ahụ ga-emepe maka Burdur site na Mpaghara Nchedo Çubuk. Isparta, Sütçüler, Konya, Beyşehir, Meram, Selçuklu na Aksaray ruru Eskil. Nevsehir, Acıgöl, Avanos, Urgup na Kayseri, mpaghara Incesu na Kocasinan gafere. Dị ka Konya Meram, Nevşehir, Göreme-Cappadocia nọ n'ihe ize ndụ. Gọọmentị na-agbachitere “ụlọ nzuzu na EIA. Agbanyeghị, conlọọrụ Encon Environmental Consultancy na-akwado akụkọ ọ bụla iji rie ihe okike, akụkọ ihe mere eme na ihe nketa ọdịbendị. Okwesiri iburu n’uche na mgbanwe ka emere ka imeghari uzo 1 / 100.000 nke ihapu ala iji nweta nzipu ozi EIA.
YHT oru ngo na "isi ihe", wepu àkù nile nke Turkey si ahịa, na-enye ọrụ ohere ga-esi mara ngo na rant! Ka anyị jiri ihe atụ kọwaa. A na-ezube eriri ahụ iji jikọọ na obodo ndị ọzọ. Enwere ụlọ ọrụ 17 gụnyere Kolin na nro nke eriri na-ejikọ Yerköy, Kayseri na Ankara.
Ihe ngọpụ maka ụgbọ oloko ahụ, ụlọ oriri na nkwari akụ ahụ agbasaghị agbagha!
Ọzọ na akụkọ EIA, a na-ekwupụta okwu dị ịrịba ama banyere Antalya Burdur, atụmatụ Isparta: X 1 na Manavgat, Serik, Korkuteli, Gölhisar, Karamanlı, Yeşilova na Bucak nke ógbè ndị a. na 2. nweta uto kwesiri ekwesi site na imeputa uzo ihe nlebara anya nke ukwu ”Pụtara; nkwari akụ na ewu.
Mpaghara iwu dị na ọrụ ahụ ebugharịwo na Ministry of Environment na Urbanization na Iwu Iwu (644). Obodo ekwughi ihe ha kwuru. Nzukọ ozi nke oru ngo a, nke enwetara akụkọ ya na 10 July, emere na 27 July. Ubi a dikwa n ’imecha ihe nile. Aghọgbuola ndị obodo ahụ site na ịsị, "Usoro ahụ ga-eme ka ị baa ọgaranya n'ụzọ akụ na ụba". Ma ọ gaghị akwụsị n'obodo nta ahụ!
Ụgbọala na-agafe Osimiri Mert 07 / 11 / 2015 Trams ga-agafe Mert River: n'ebe ọwụwa anyanwụ n'ógbè nke Samsun Tekkeköy gbasaa ruo ìhè okporo ígwè na-aga site na Mert River Bridge ga-abụ mbubreyo, ọrụ malitere na akwa mgbasa. Mert ìhè okporo ígwè òkè nke mmiri na oké osimiri nke osimiri usoro a ga-eji na oru ngo e nyere aka na ngalaba nke mmiri okporo ụzọ. Light Okporo ígwè System Project na-arụ ọrụ iji mụbaa akporo ọrụ na akwa maka pedestrians ga-ekenyela niile ụgbọala okporo ụzọ maka ugbu a na ngalaba nke akwa e malitere. The N'ihi nke oru ngo iji hụ na ụgbọ na nke ígwè na pedestrians, ntaghari ohuru ọrụ ga-agwụ agwụ na njedebe nke afọ 4 82 mita n'obosara na mita ogologo ẹdude akwa. ...
O mere ihe ojoo nke oma na Havaray 19 / 06 / 2012 Dị ka ọrụ Köseler si kwuo; a ga-emepe usoro okporo ígwè ikuku iji nweta ohere n'akụkụ abụọ nke ọwa, Mechanical engineer Basri Köseler, Minista Minista Recep Tayyip Erdogan's Istanbul Channel Project emewo onyinye na onyinye. Ya mere, a ga-eme ka ntọala nke ọwa ahụ guzosie ike, yana njem njem na njem ibu. Basri Köseler kwuru na o mere ihe mgbaba na ego ọnụ ma zigara Prime Minista Erdogan; Otú ọ dị, ọ sịrị na ọ nataghị azịza ọ bụla. Köseler, bụ ndị isi ụlọ ọrụ na-ekwu maka ụgbọelu ụgbọelu nuklia mbụ nke emere maka ọwa a ga-agwụcha site n'ịrụcha ọrụ ahụ. ỤMỤ NA NDỊ MGBE NA-EKWU NDỊ K
Arụ ọrụ nkwụsị, ọ bụghị njide 16 / 12 / 2013 Ọ bụghị ọrụ efu, kama ọ bụ ajọ ifufe: ISTANBUL aghọwo obodo mmiri mgbe ọ bụ obodo mmiri. Mmetụta ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-abụkarị ihe kpatara njem a. 3. akwa, 3. Ihe ndozi a na-ahụ maka ọdụ ụgbọelu na Kanal Istanbul bụ njikọ kachasị atọ ikpeazụ. Mgbe anyị na-ele anya mgbe na otu esi arụ ọrụ ahụ, anyị na-ahụ nnukwu mmebi iwu, na-eleghara ihe ọmụmụ sayensị na obodo anya. Enweghi ike ịmepe ikpe na oge ikpeazụ. Ọrụ ndị a na-aga n'ihu na mkpebi nke ndị ọkàikpe na ndị ọkachamara. Prọfesọ na Yıldız Technical University Dr. Betül Şengezer si Channel Bet
Ntinye 2 kilogram 4 na-eme ka ụwa mara ndị agha 16 / 02 / 2016 2 ga-ewebata Agha na ụwa na oru 4 ijeri ijeri-paụnd: Agha ga-ewebata ihe ọhụrụ na njem nlegharị anya na Europe. Obodo ukwu nke Ordu, nke ga-eso na MIPIM na ụlọ ahịa 4, na-echere ndị nwere ego si mba ọzọ. Obodo ukwu nke obodo obodo ORDU na-ekere òkè na MIPIM, otu n'ime ụlọ ahịa ala na-eduzi ụwa nke a ga-enwe na France n'etiti March 2-4 ọrụ na uru nke ihe dịka 15 ijeri pound. N'ime oru ngo nke Ordu Metropolitan Municipality ga-ewebata n'ememe 18 nke ugbo ozo, 400 nde pound Ordu-Giresun Airport, 320 nde pound Melet River na 120 nde pound Çambaşı Ski Resort. Army ...
Okporo ụzọ na mpaghara Gaziantep 13 / 06 / 2016 A ga-ejikọta okporo ụzọ na Gaziantep OIZ na Project a: Gaziantep Organic Industry (GAOSB) 3. Ọrụ 420 mita ụgbọ ala, nke malitere iwu n'ihu Ụlọ Ọrụ Social nke Region, ga-abụ ihe ngwọta maka okporo ụzọ. Dika ihe edeputara edere site na GAOSB, iwu nke uzo agafe agafe na oru nhazi ala. 3 na oru ngo kachasị agafe na April. A ga-ekpochapụ njupụta okporo ụzọ na steepụ ụgbọ okporo ígwè na-agafe na OIZ. Onye isi oche GAOSB Deniz Köken kwuru na a ga-agwụchasị ihe ngosi nke ụgbọ okporo ígwè 420 mita n'ime ụbọchị 100. Ogologo ihe oru GAZİRAY ...
Ngwuputa 52 nke ulo oru nchedo ga abuo okpukpu abuo 03 / 04 / 2014 A ga-eji okpukpu abụọ 52 rụọ ọrụ nke okpukpu abụọ nke olu ụlọ ọrụ nchekwa ahụ: a na-enyocha azịza nke 8 maka ụgbọelu ọzụzụ nke Initiative (BEU) na a na-akwadebe faịlụ oku. N'ihe Nkwekọrịta Helicopter Helicopter na-echekwa na Coast Coast, a na-edepụta oku oku (RFP), ụlọ ọrụ 5 (Airbus Helicopters, NH Industries, Agusta Westland, Sikorsky na Bell) natara faịlụ ahụ. Ụlọ ọrụ ndị a ga-etinye ikikere ha site na 16 June. Ejiri ndebanye aha 52 n'ime otu afọ. Ụlọ ọrụ ahụ na - agbalị imeghachi omume nke SSM na nnukwu ego na R & D. A na-egosiputa mmepe a na registrations patent. Dị ka akwụkwọ akụkọ Turkish Patent Institute (TPE) si kwuo, ego mkpofu R & D abawanyela na dollar 1.
Nchikota ọdọ mmiri na snow na Salda ski resort 22 / 01 / 2015 Mmiri mmiri na snow na Salda Ski Center ọnụ: Ọrụ Ndị Ntorobịa na Egwuregwu Na-ahụ maka Ahịa Sancar, Salda Ski Center zukọtara ọnụ tupu oge mmalite nke oge ahụ agwa ndị òtù ụlọ ọrụ ahụ. Sancar kwuru na ha ga-emeghe oge na Salda Ski Center na ịbanye ụlọ akwụkwọ maka mgbaji izu ụka ma kpọọ onye ọ bụla na Salda Ski Center. Salda Ski Center na Yeşilova 2015 afọ nke ski ski, a ga-eme na Sunday na nkwado nke Gọọmenti Gọọmenti nke Ndị Ntorobịa Yeşilova bụ Ahmet Sancar, na-emeghe Gọvanọ Hasan Kürklü, ndị MP, ndị ọzọ nọ na usoro iwu ahụ, ndị egwuregwu na ụmụ amaala ga-aga. o kwuru. Ụzọ bụ ihe na-enweghị isi ...
Òtù Doğa Na-eme Ihe Omume Mgbanwe Izmir 16 / 11 / 2017 Mkparịta ụka na Izmir Bay Pass Highway na-eto eto. Nature Society, EGEÇEP, 85 ndị mmadụ Izmir Chamber na Gulf nke na-eme na gburugburu ebe obibi mmetụta ntule akụkọ gbara akwụkwọ a ikpe megide zubere okporo ụzọ akwa oru jikọrọ "nti" rịọrọ ndị mmesa mkpebi ikpe. Public òtù, ọmụmụ na obodo ọha afo gara-aga na Gediz Delta, sochiri 35 afọ nke ọkachamara ma ọ bụ banyere 20 puku abụọ nke pinki hatching, bridging akụkụ dị mkpa nke pinki na izu na Delta Nature Society ekpughewo na ndepụta ke ebe zubere. Kemgbe ụbọchị, Aziz Kocaoglu "E Gulf mgbanwe okwu. Ha na-ekwu na anyị nwere ike ime ya. Abụ m nwanna gị nwere ọtụtụ nhoputa. İzmir Metropolitan Municipality İzmir
Ọganihu dị elu na-arụ ọrụ ihe gbasara ọdịdị nke ụwa 19 / 02 / 2013 Ụlọ ọrụ na-agba ọsọ ọsọ ọsọ adịghị ege ntị na okike ma ọ bụ akụkọ ihe mere eme na-agba ọsọ ọsọ ọsọ, nke na-aga n'ihu na-arụ ọrụ n'ogologo ọhụụ ebe ọ bụ na a ezubere ịzụlite maka 29 October afọ a, na-eburu ya ọtụtụ ụkpụrụ. Mgbe mbibi nke ili Rom nọ na nkeji Cumhuriyet na ụbọchị ndị a, ọtụtụ narị pine ndị na-agbada n'akụkụ okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè ahụ emebisiela. AHỤTỤ PINE KWESỊRỊ Ọtụtụ narị osisi pine na-achụ àjà na Ụlọ Ọrụ Ọdịdị High Speed. Ọ bụ ezie na enweghi obi abụọ gbasara ebe a na-eme atụmatụ imeghe na ebe 40 mita chestnut na osisi linden dị na Maşukiye ka a ga-eji mee ihe n'ọdụ ụgbọ elu High Speed ​​Train, nke a ...
Ogologo ihe omimi nke ihe omumu na onodu ogugu 14 / 01 / 2019 Maka ndị chọrọ njem nlegharị anya na nke a na-agaghị echefu echefu na echiche ndị mmadụ, nhọrọ bụ njem site na ụgbọ oloko. Kars na Van aghọwo akụkọ ndị kachasị ewu ewu n'oge ndị na-adịbeghị anya, ebe ndị nwere ike ịchọta ụzọ ha si Adana ruo Izmir. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ịga njem site na ụgbọ oloko bụ ihe kachasị amasị ndị chọrọ ịme njem ha nke ọma na echefughị ​​ya na echiche ndị dị oke mma. Kars, nke ghọwo ụzọ a na-ewu ewu maka ezumike oyi, nwere ike inweta site na Eastern Express. The Republic of Turkey State Railways (TCDD), otu n'ime ndepụta nke Orient Express ụgbọ okporo ígwè, na-arụ ọrụ ọ bụla ụbọchị n'etiti Ankara na Kars. Kars ugbu a na-acha ọcha na snowfall, na 21 amalite na Jenụwarị na 1 mechara na February.
Ndị otu ndị ọkàiwu nke oge a
Alt Nationalnbeşik National Park
Kayseri Antalya High Speed ​​Train project
Kayseri Nevsehir Aksaray Konya Antalya High Speed ​​Train
Termossos obodo ochie
Mpaghara Nchekwa Anụmanụ
Volkswagen Bagyurdu OSB'den ọkpụkpọ oku bịara!
Ụgbọala na-agafe Osimiri Mert
Arụ ọrụ nkwụsị, ọ bụghị njide
Ntinye 2 kilogram 4 na-eme ka ụwa mara ndị agha
Okporo ụzọ na mpaghara Gaziantep
Ngwuputa 52 nke ulo oru nchedo ga abuo okpukpu abuo
Nchikota ọdọ mmiri na snow na Salda ski resort
Òtù Doğa Na-eme Ihe Omume Mgbanwe Izmir
Ọganihu dị elu na-arụ ọrụ ihe gbasara ọdịdị nke ụwa
Ogologo ihe omimi nke ihe omumu na onodu ogugu